Beddel goobtan MacBook si aad u hagaajiso dhibaatooyinka midabka muuqaalka dibadda [Pro tip] | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Beddel goobtan MacBook si aad u hagaajiso dhibaatooyinka midabka muuqaalka dibadda [Pro tip]
Beddel goobtan MacBook si aad u hagaajiso dhibaatooyinka midabka muuqaalka dibadda [Pro tip]
Miyaad dareentay in bandhigaagu aanu si sax ah u muuqan marka la isticmaalayo MacBookga ama MacBook Pro? Miyuu aad u diiran yahay, sida wax walba lagu dahaadhay orange? Waa dhibaato caadi ah, laakiin waxaa jirta hab fudud oo lagu saxayo.
Ka hel sida ku jira tibaaxaha pro ee maanta.
Tani waa "arrin" la yaab leh isticmaalayaasha MacBookga qaarkood sababtoo ah waxay ka dhigaysaa muuqaal dibadda ah oo si fiican u shaqeynaya u muuqda mid jabay. Waxaana laga yaabaa inaad dareentay inay kaliya dhacdo marka MacBookgaagu furmo; xir daboolkeeda midabadana si fiican bay u muuqdaan.
Waxa laga yaabaa inaad hore ugu ciyaartay muuqaalo muuqaalo kala duwan oo ku jira Xulashada Nidaamka, oo aad heshay goob midab ah oo wax hagaajinaysa. Laakiin waxaad si fudud u baabi'in kartaa dhibaatada.
Waa kuwan waxa keena midabada qalaad ee bandhigyada dibadda - iyo sida loo hagaajiyo.
Waa maxay sababta bandhigyadu ay ugu eg yihiin kuwa xun MacBookga?
Waad ku farxi doontaa inaad ogaato in tani aysan ahayn dhibaato qalabeed. Midkoodna MacBookgaaga ama muraayadaada dibadda ama ma jabna. Taa beddelkeeda, sababtoo ah MacBookgaagu wuxuu isticmaalayaa True Tone si uu u cabbiro midabada ku salaysan iftiinka dawan ee kugu xeeran.
Habkani wuxuu si cajiib ah ugu shaqeeyaa MacBookgaaga laftiisa, iyo mararka qaarkood, si fiican ayuu ugu shaqeeyaa bandhigyada dibadda, sidoo kale. Dhinacyo badan, si kastaba ha ahaatee, waxay u horseedaa sawir aad u diiran (ama aad u qabow?) Oo aan haba yaraatee ku fiicnayn in la eego.
Waxaa jira laba xal oo fudud oo aad isticmaali karto si aad wax u saxdo.
Sida loo saxo midabada bandhiga dibadda
Waxaa laga yaabaa in sida ugu fudud ay tahay in la xiro daboolka MacBookga marka la isticmaalayo shaashad dibadda ah. Tani waxay curyaamisaa Tone True (maxaa yeelay dareemaha ayaa xannibmay) oo isla markaaba waxay ka dhigaysaa muuqaalkaaga dibadda mid aad uga wanaagsan.
Haddii aadan rabin inaad xirto mashiinkaaga sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad isticmaasho labadaba bandhigyada isku mar, raac tillaabooyinka hoose si aad u damiso Tone True:
Open Nidaamka Nidaamka MacBookgaaga.
In ka Muqaal Retina-ku-dhismay daaqada, ka saar Tone True sanduuqa si loo joojiyo.
Dhibaatada la xaliyay!
Taasi way fududahay!
Kani ma kutaan?
Rumayso ama ha rumaysan, hab-dhaqankani waa ula kac - maaha cayayaan macOS. Dib ugu noqoshada 2018, Apple waxay u samaysay si tikniyoolajiyadda True Tone ee buugaagteedii ugu dambeeyay ay u fidin karto bandhigyada dibadda oo ay isku hagaajiso midabyadooda, sidoo kale.
Waa fikrad fiican, oo leh bandhigyo dibadda ah, si fiican ayay u shaqeysaa. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo fudud looma dhisin True Tone, waxayna u muuqdaan kuwo argagax leh marka la isticmaalo.
Way fiicnaan lahayd haddii Apple u ogolaato True Tone in si toos ah loo curyaamiyo marka bandhiga dibadda ahi ku xidhmo (oo si toos ah mar labaad u shaqeeyo marka uu go'o), laakiin waa inaad adigu beddeshaa hadda.
Talooyin iyo agabka Badbaadada Warbaahinta Bulshada si loo yareeyo Khatarta
Shopify Hagaha SEO: Sida loo kordhiyo taraafikada dabiiciga ah ee dukaankaaga